စီမံခန့်ခွဲခြင်းအယူအဆ | SoGoodWeb Myanmar
Prosoft Comtech Co,. Ltd.
အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သောစီးပွားရေး/The Go-Giver ပေးတာများလျှင်ရတာများမည်/လုပ်ငန်း လူ့အခွင့်ရေး အလုပ်အကိုင် ကိုထူထောင်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ငန်းအတွက်တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်
သည်အခြားမြို့နယ်မှအခွင့်အရေးမရှိသောလူငယ်များအတွက်အလုပ်ရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး အခြားမြို့နယ်အသီးသီးမှဝဘ်ဆိုဒ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ချင်းမိုင်လူငယ်များဖြင့်လုပ်ပေးမည် ၊ တောင်ပေါ်ကလေးများက ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတတ်ရာတွင်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ရေးတွင်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဆီသင်တန်းတက်နိုင်ပါသည် ၊ အခြားသူများနှင့်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က ဗဟုသုတနှင့် ဘဝနေထိုင်ရေးများကို ဝင်ရောက်သင်တန်းချပေးပါသည်
အဖွဲ့အစည်းကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ရန် ဝန်ဆောင်သူများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကတာဝန်ယူလျက်ရှိပါသည် ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုရှိလာသောကြောင့်အလုပ်ရာထူးအရေအတွက်ရာချီလိုနေအပ်ပြီး ကလေးများအပေါ်လည်းအောင်မြင်မှုရစေပါသည်
Prosoft Web သည် ပေးတာများလျှင်ရတာများမည် (The Go-Giver) ဟူသောအယူအဆကိုအတည်ပြုထားသည် ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်နေသည့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတွင် အခြားသူများ၏အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းလာရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းကအကျိုးအမြတ်ရစေရန်ဖြစ်သည် ၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်မလျှော့ပဲ အတားအဆီးများကိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်မည်ဖြစ်သည် ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကျွန်ုပ်တို့က အခြားသူများ၏စီးပွားရေးအတွက် အကျိုးအမြတ်"ပေး"သွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပြန်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည် Prosoft Web သည်အခြားမြို့နယ်အသီးသီးမှအခွင့်အရေးမရှိသောလူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် လုပ်ငန်းရှိစေရန်နေရာဖြစ်သည်
Prosoft သည် ဆော့ဝဲစီးပွားရေးအတွင်းနှစ်ပေါင်း 25 နှစ်အထက်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ဝန်ဆောင်သူများက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဝဘ်ဆိုဒ်လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလာသည် ၊ သို့ပေမယ့်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကလူအင်အားနည်းနေပြီး အခြားမြို့နယ်ကလူငယ်များ လုပ်နိုင်ရက်သားနဲ့ အဘယ်ကြောင့်ဝဘ်ဆိုဒ်လုပ်ရန် ဘန်ကောက်မှာလာလုပ်ရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကအချိန်တိုင်းစဉ်းစားနေပါသည် ၊ အခြားမြို့နယ်မှလူငယ်များကိုအလုပ်ပေးလုပ်လိုက်လျှင် မြို့ကြီးများအတွင်း အခက်အခဲလာမလိုဟု ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုချက်များဖြစ်သည် ၊ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ကုမ္မဏီများကို ကျွန်ုပ်တို့ IT Outsourcing အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည် ၊ IT လုပ်ငန်း E-Marketing သည်ဘန်ကောက်မှချင်းမိုင်သို့ အခြားနိုင်ငံမှချင်းမိုင်သို့ ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုနည်းတူ Prosoft Web မှာလည်း ဝန်ဆောင်သူအလိုရှိသည့်အတိုင်း ပို၍ ကောင်းမွန်ခြင်း လျင်မြန်ခြင်း ဈေးချိုခြင်းတို့ကို လုပ်ပေးနိုင်ပါသည် ၊ ဘန်ကောက်မှဝဘ်ဆိုဒ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းကို ချင်းမိုင်သို့ Outsource အနေဖြင့်အလုပ်ငှားမည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း ချင်းမိုင်သည် IT Outsource တည်နေရာဖြစ်လာမည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်သူများမည်သူမဆို အရည်အသွေးကောင်းသော ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုလိုချင်လျှင် SoGoodWeb က ဝန်ဆောင်သူလိုအပ်ချက်အပေါ်တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး လှပသောပုံစံ တရားမျှတသောဈေးနှုန်းဖြင့်ဝန်ဆောင်မည်
ဆော့ဝဲ ဝဘ်ဆိုဒ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြား IT ဝန်ဆောင်များများတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိနေပြီး ပြည်တွင်းအနှံ့အပြားဆီ ဝန်ဆောင်သူများ၏ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းကိုခံရသည် ၊ အတွေ့အကြုံဆီမှဖန်တီးထားသောဝဘ်ဆိုဒ် SoGoodWeb.com ကိုပြုလုပ်ရန်အယူအဆရှိလာပြီး ဝန်ဆောင်သူများအတွက်လွယ်ကူစွာဖြင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်က Prosoft Web က SoGoodWeb ဖန်တီးထားသောဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝန်ဆောင်သူလိုအပ်ချက်အတွက် ချင်းမိုင်မြို့တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည် ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ချင်းမိုင်မြို့သည် Creative City ဖြစ်၍ အတွေးအမြင်ကောင်းသူ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပြည့်စုံနေသောမြို့နယ်ဖြစ်သည် ၊ ဘန်ကောက်တွင်နေရာငှားရမ်းခမကုန်ချင်သောကြောင့် ငှားရမ်းခသက်သာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ချင်းမိုင်တွင် အလုပ်သမား 350 ယောက်အထက်ဖြင့် ရုံးအသစ်တည်ထောင်ထားပါပြီး ဝန်ဆောင်သူအတွက်လည်း ဈေးချိုခြင်း လျင်မြန်ခြင်း ကောင်းမွန်ခြင်း အကျိုးအမြတ်ရစေပါသည် ၊ SoGoodWeb အောင်မြင်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ စွမ်းရည်ကောင်းသောအလုပ်သမားကြောင့်ဖြစ်ပြီး အခုချိန်တွင်ဒီအလုပ်သမားများကို SoftbankAcademy.com ဖန်တီးယူထားပါသည် ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သမားများသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်ကြားခြင်းလေ့လာခြင်းဖြင့် အနာဂတ်စံပြသူများဖြစ်လာပါမည
ဈေးချိုခြင်း လျင်မြန်ခြင်း ကောင်းမွန်ခြင်း ဒီနေရာတွင်အဖြေရှိသည်
SoGoodWeb ၏အဓိကဝန်ဆောင်မှုမှာ "ဈေးချိူခြင်း လျင်မြန်ခြင်း ကောင်းမွန်ခြင်း" ဖြစ်သည် ၊ ဝန်ဆောင်သူလိုအပ်ချက်များများဖြစ်သော ဝဘ်ဆိုဒ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အပိုဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးပြည့်စုံခြင်း လျင်မြန်ခြင်းအပေါ်ဈေးနှုန်းသင့်လျော်ရမည် ၊ ထို့ကြောင့် SoGoodWeb အပေါ်ဝန်ဆောင်သူများယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည် ၊ SoGoodWeb သည်ဝန်ဆောင်သူများအတွက် ပစ္စုပ္ပန်တွင်လူအများလက်ခံနေသော အွန်လိုင်းဈေးကွက်ကို ခြေလှမ်းရန် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုအသစ်ဖြစ်သည်
1. ဝန်ဆောင်သူများအတွက်ရွေးချယ်ရန် Template အများအပြားရှိသည်
စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်သောသူများအတွက်Template Free ဝန်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည
"One Stop Service" ပုံစံဖြစ်ရန်အတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုရှိသည်
24 နာရီအတွင်း Support ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသည် ၊ အခြားဘက်ဘက်မှစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဥပမာ - ကိုယ်တိုင်ဖြင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးခြင်း, အွန်လိုင်းတွင်ရောင်းအားကောင်းစေရန်လုပ်ယူခြင်း, ကြော်ငြာဓါတ်ပုံများကိုဖန်တီးခြင်း စသည့်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကအွန်လိုင်းဈေးကွက်အစီအစဉ်ချမည့်သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Slogan "We are SoGoodWeb, We are You"ဖြင့် ဝန်ဆောင်သူလိုအပ်ချက်အတိုင်း အဓိကဝန်ဆောင်မှုပုံစံ ဈေးချိုခြင်း လျင်မြန်ခြင်း ကောင်းမွန်ခြင်း ဝန်ဆောင်သူဆီထံ ပြန်တုံ့ပြန်ပေးပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့က ချင်းမိုင်မြို့သူမြို့သားများဆော့ဝဲရေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိစေသည့်လိုအပ်ချက်များရှိသည် ၊ အခြားကုမ္မဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္မဏီက ချင်းမိုင်မြို့ Creative City တွင်ရှိနေပြီး ဒီမြို့တွင်အဆန်းအသစ်တီထွင်မှုပေါများသည် ၊ ဘန်ကောက်နှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလုပ်သမားငှားရမ်းခသက်သာခြင်းလည်းပါဝင်သည်
SoGoodWeb ကိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်သောသူများသည် E-Marketplace တွင် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို အခမဲ့ကြော်ငြာနိုင်သည
SMEs လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ငွေသက်သာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Prosoft က www.LionJobMyanmar.com ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပြည်တွင်းအနှံ့အပြားတွင်အခမဲ့အလုပ်ကြော်ငြာနိုင်ရန်ဖန်တီးထားသည်
SMEs စီးပွားရေးများအတွက်စားရင်းအင်းပရိုဂရမ်သည် အလုပ်လုပ်ပုံစနစ် 20 စနစ်ဖြစ်ဖြင့်ဖန်တီးထားပြီး လုပ်ငန်းအတွင်း အသုံးပြုရာတွင်လွယ်ကူစေပါသည်
ဈေးဆိုင်တွင်အသုံးပြုသည့် POS ပရိုဂရမ်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်
ဈေးဆိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ထားသော ပရိုဂရမ် POS ဆော့ဝဲ (သို့) ဆိုင်တွင်အသုံးပြုသည့် ပရိုဂရမ် (Point of Sale) ဈေးဆိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်ပြီး စီးပွားရေးအသေးစား အလတ်စား အကြီးစားများနှင့်လည်းလိုက်ဖက်သည်